लामो समय को लागि, वैज्ञानिकहरूले पनि जीव आश्चर्य, हाम्रो लेखमा छलफल गरिनेछ जो को taxonomic स्थिति निर्धारण गर्न सकेन। आखिर, यो एक unicellular सक्षम रहेको गर्न सक्रिय सार्न, पूरा गर्दा photosynthesis प्रक्रिया। र यो नाम चासो छ। यो chlamydomonas।
विभाग ग्रीन शैवाल
फलस्वरूप, summarily, वैज्ञानिकहरु जीव को एक प्रतिनिधि हो भनेर अन्तमा छन् , को बिरूवा राज्य ज्योतिमा जैविक पदार्थ स्वतन्त्र संश्लेषण सक्षम र एक सेल मा हरियो plastids comprises।
Chlamydomonas (फोटो कक्ष सामग्रीहरू देखाउँछ) अप गर्न हजार 15 प्रजातिका साधारण हुन्छन् जो हरियो शैवाल को एक समूह, पर्छ। यो सानो अलवण शरीर मा पाउन सकिन्छ। अक्सर तिनीहरूले अप खुसीले गदगद छन्। यो alga त्यसैले, सक्रिय एक फोहोर वातावरणमा propagates, पानी को सफाई बारेमा धेरै picky छैन।
Chlamydomonas: सेल संरचना
को शैवाल केवल एक सेल सूक्ष्म आकार प्रतिनिधित्व छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो एक एकदम जटिल संरचना जीवनको सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम, छ।
Chlamydomonas सेल एक गोलो र कहिलेकाहीं pyriform छ। यसको अगाडि किनारा मा दुई flagella स्थित छ। यो organelle आन्दोलन। सेलुलर खोल comprises pectic पदार्थ र ग्लाइकोप्रोटीन। यी कार्बोहाइड्रेट एक जीव को बाहिरी पत्र बल दिनकै।
आन्तरिक अर्द्ध-तरल सामग्री, फारम र प्रदर्शन चयापचय दिन्छ जो - को cytoplasm भित्र स्थित अन्य कक्षहरू जस्तै। को शैवाल को सबै भन्दा chloroplast लाग्छ। यो cupped छ। कहिलेकाहीं यो पनि chromatophores भनिन्छ। पोषक सञ्चय जुन वरिपरि प्रोटिन प्रकृति को गठन, - यो pyrenoids छ। "अर्थमा अंग" को एक प्रकारको - पनि cytoplasm मा प्रकाश संवेदनशील आँखा छ। यो stigma भनिन्छ।
contractile vacuole को समारोह
Chlamydomonas - जलीय जीवन। त्यसैले, यो वातावरण देखि सेल प्रवेश कि तरल पदार्थ हटाउन निरन्तर आवश्यक छ। contractile vacuole - यो विशेष organelles गरेको छ। किन पानी Chlamydomonas मा खुवाइन्छ छ? यो कुरा पानी मा नुन सामग्री सामान्यतया कक्ष नै भन्दा धेरै उच्च छ भन्ने छ। तल्लो मा एक उच्च एकाग्रता संग एक क्षेत्रबाट भौतिक को व्यवस्था र तरल प्रवाह अनुसार। अर्थात् शैवाल कक्षमा। Contractile vacuole अतिरिक्त तरल पदार्थ देखि शैवाल हटाउनु।
सेल गतिविधि विशेषताहरु
रुचाउने को तरिका द्वारा chlamydomonas mixotrophy छ। यो ज्योति photosynthesis सक्षम छ भन्ने हो। तर जैविक पदार्थ को संश्लेषण लागि आवश्यक अवस्थाको अभाव मा heterotrophs बन्नेछ। यो भर्खरै पानी हो तयार पोषक बेकारी।
चिस्यान सेल organelle आन्दोलन पुनःसेटहरू र सबै महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू को कमी निलम्बित छन्। त्यसैले प्रतिकूल अवस्था chlamydomonas वहन।
शैवाल प्रजनन थुप्रै तरिकामा हुन्छ। प्राय - अलैंगिक। यस मामला मा, सेल बदल छ। यो flagella रिसेट, त्यसैले आन्दोलन असम्भव बन्नेछ। कक्षहरू भित्र zoospores गठन। आफ्नो संख्या28 गर्न यो motile कक्षहरू छ दायरामा हुन सक्छ। तिनीहरूले बढ्न र एक स्वतन्त्र अस्तित्व सुरु गर्न मातृ जीव बाहिर आउँछन्। यो प्रक्रिया धेरै तीव्र छ - यो हरेक दिन दोहोर्याइएको छ। जब अवस्था Chlamydomonas जीवन को लागि अनुकूल छन्, यो जान्छ यौन प्रजनन। - यसको gametes भित्र यसरी गठन रोगाणु कक्षहरू। तिनीहरूले जोडी को confluence मा पानी मा जानुहोस्। फलस्वरूप, यस zygote को गठन। यो अवस्थामा, तिनीहरूले अनुकूल अवस्था को शुरू भएको सामु छन्। त्यसपछि zygote विभाजित, र तिनीहरूलाई प्रत्येक4वयस्क खेल्छ।
प्रकृति र मानव जीवनमा Chlamydomonas को मूल्य
हरियो शैवाल को प्रतिनिधि लामो प्रयोगशाला अनुसन्धान को विषय भएको छ। कारण फूल खोक्रो स्थिर पानी यसको मूल्य को प्रकृति। विशेष सक्रिय यो प्रक्रिया शरद ऋतु र वसन्त मा हुन्छ। यो प्रजनन अवधि सबैभन्दा ठूलो तीव्रता शैवाल।
एकल-celled हरियो alga सूक्ष्म जीव chlamydomonas, यो एक बरु जटिल संरचना र जलीय वातावरण यसको अस्तित्व सम्भव बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू छ।
को अरल सागर मा Barsakelmes द्वीप
किन सबै कुराको लागि भुक्तानी गर्नुपर्छ, जब तपाईं मुक्त गर्न सक्छौं?
म लिङ्क HTML-पृष्ठ मा अन्डरस्कोर कसरी हटाउने?
बेलुन को आंकडा - एक महान छुट्टी सजावट
यो आदर्श महिला के हो?
जिमनास्टिक टेप: छनौट को विशेषताहरु
वैदिक भान्सा। शाकाहारी व्यञ्जन